Abiy oo qabtay casho lagu gelayey $173,000 – Beegsonews-Wararka maanta
Home XOGAHA DUNIDA Abiy oo qabtay casho lagu gelayey $173,000
Beegsonews-Maal-qabeenno Itoobiyaan ah ayaa bixiyey 173,000 oo dollar midkiiba, si ay uga qeyb galeen casho uu sameeyey ra’iisul wasaare Abiy Ahmed oo lacag loogu ururinayey qurxinta magaalada caasimadda ah ee Addis-Ababa, sida ay werisay warbaahinta dowladda.
Warbaahinta dowladda ku xiran ee FANA, ayaa daabacday sawirrada dadka cashada ka qeyb-galay oo xiran suudad, islamarkaana fadhiya kuraas lagu deday ubaxyo.
Xafladda ayaa waxaa loo qabtay in lacag loogu ururiyo mashruuc saddex sano soconaya oo uu wado Abiy, kaasi oo sare loogu qaadayo sumcadda caasimadda.
Mashruuca oo lagu badinayo goobaha doogga leh ee caasimadda, ayaa waxaa masaafe dhan 56 km oo isku wareeg ah looga hir-gelinaya, geedo, beero, darjiinooyin, marinno ay maraan baaskiilada iyo goob lagu socdo oo ku xirmaya webiyada magaalada
Mashruuca ayaa ku kacaya hal bilyan dollar.
Illaa iyo hadda lama yaqaan tirada rasmiga ah ee dalka ka qeyb-galay cashada iyo cidda ay ahaayeen.
Previous articleMas’uuliyiin katirsan Dowladda oo Kenya laga soo Celiyay
Next articleXuutiyiinta oo beeniyey inay weerareen Makkah